Diyopost.com :: भाडा बढाउने दाउमा व्यवसायी, दसैंलाई टिकटको अग्रिम बुकिङ अझै खुलेन ! भाडा बढाउने दाउमा व्यवसायी, दसैंलाई टिकटको अग्रिम बुकिङ अझै खुलेन ! - Diyopost.com
भाडा बढाउने दाउमा व्यवसायी, दसैंलाई टिकटको अग्रिम बुकिङ अझै खुलेन !
काठमाडौँ, भदौ २९ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले ५ वर्षदेखि भाडा नबढेको र यातायात संघ–समितिका बैंक खाता रोक्का गरिएको भन्दै दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन अटेरी गरेको छ । यसले दसैं मनाउन उपत्यकाबाहिर जानुपर्नेहरू मर्कामा परेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले भने बैंक ऋण, चालक, सहचालकको खर्च र टायर, बेरिङलगायत १८ प्रकारका सामानको मूल्यवृद्धि भएकाले भाडा बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले गाडीमा लाग्ने इन्धन तथा पार्टपुर्जामा बर्सेनि मूल्यवृद्धि भए पनि सरकारले भाडादर समायोजन नगरेको गुनासो गरे । ‘भाडादर समायोजन नगरेको पाँच वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभए दसैंमा थपिँदै आएका ५ सय बससमेत थप्न सकिँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमन खबर छापिएको छ ।